Aqoon La,aan Waa Iftiin La,aan, Adoo Gaboobay Been Adeegsana Waa Aakharo La,aan – Rasaasa News
Aqoon La,aan Waa Iftiin La,aan, Adoo Gaboobay Been Adeegsana Waa Aakharo La,aan
May 31, 2010 aan, aan Waa Iftiin La, Aqoon La
Kooxda Jwxo-shiil, oo soo bixisay biilkii beenta [unpo], Aqoon la,aan darteedna dadweynaha u sheegay in ay urur weyn heshiis kala saxiixdeen [majaahidiin], yaa u sheega in ururkaasi uusan ahayn wax jira, balse lacago uun ka uruursaday dadka aan aqoonta u lahayn.
Boggaga ku hadla afka JWXO-shiil, ayaa waxay baryahan buunbuuninayeen been si ay ugu beer laxawsadaan dadweynaha aan aqoonta u lahayn ururkan, waxayna qoreen boggagani in Mohamed Omar Osman [Jwxo-shiil], Maday [Abtidoon] iyo Ahmed Abdi Gurxan [xamari] ay ka qayb galeen shirka Ururka UNPO uga socday dalka Italiyaaniga.
Ururka la magac baxay UNPO [Unrepresented Nations and Peoples Oragnisation] waa Urur NGO ah oo xagga Xuquuqul Insaanka [Humanitrian] oo kaliya ugu doodi kara Ururadda xubnaha ka ah. UNPO waa urur madaxbanaan oo ka soo horjeedda dagaal nooca uu doonaba ha noqdee. Waxaa haatan xubno ka ah illa 57 Urur oo intoodda badan magacyadoodda meelna lagu maqal amaba lagu arag, sidda Ahwazi, Cabinda, Hmong, Khmer Krom, Sanjak, Tsimshian, iwm.
Magacyada laga yaqaan ee xubnaha ka ah waa Abkhazia, Oromo, Somaliland, iwm.
Maadaama uu Ururkani yahay mid u dooda Qowmiyaadka aan UN laga masalin, ayuu sanadkii 1999 Guddoomiyaha Jaaliyada Jarmalka oo markaa ahaa Mudane Salahdin Macow xooga saray, sidii ururkan looga mid noqon lahaa. Xiligaasi waxay Gudoomiyaha Jaaliyadda Jarmalka is dhaafsadeen qoraalo.
Sidii dalka Ogadenia looga diiwaan galiyo ururkaas, waxaa ka galay dhaqaalo badan. Arintu markii ay soo dhawaatay, sidii loo diiwaan galin lahaa, ayaa Mohamed Osman oo markaasi ahaa Guddoomiyaha Jabhadda ONLF, arintii uu ku wareejiyay nin markaasi degenaa dalka Holand oo magaciisa la yidhaahdo Nogobi. Salahdin waxaa la amray xiligaas in uu lacag kale oo diiwaan galin ah uu u diro Nogobi, amarka sidaas ayaa loo fulin lahaa, laakiin Nogobi ayaa lacagtii ku tasarufay, mana ayna gaarin Ururkii la rabay in loo shubo.
Ururka UNPO oo ah [international non governmental organization] saldhigiisu waxaa weeye magaalada Den Haag ee dalka Holand [the Niederland], waxaana la aasaasay 11 Februar 1991.
Ururkan wuxuu ku tiirsan yahay shanta qodob ee soo socta.
1st Acceptance of the equality of all nations and peoples, and recognizing the right of self
2nd Observance of human rights as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
3rd Commitment to democracy and pluralism and rejection of totalitarianism and religious intolerance
4th Rejection of terrorism as a means of enforcement of interests
5th Respect all people and communities.
Laga bilowaa 2003 waxaa Ururkan Guddoomiye u ah ninka magaciisa la yidhaaho Marino Busdachin oo u dhashay Umago (Istria, Croatia), isaga iyo reerkiisa waxay Taliyaaniga soo degeen 1961.
Sanadii 1987 ayuu wuxuu isku sharxay maamulka magaalada Trieste ee dalka taliyaaniga, isaga oo musharax uga ahaa xisbiga xag jirka ah ee Transnational Radical Party. Wuxuu aqalka magaalada Trieste xildhibaan uga ahaa xisbiga ku sifoobay xagjirnimada inta u dhexaysay [City Council of Trieste 1978-82]. Halkaana waxaa ku soo afjarantay ka tirsanaanta maamulka magaaladda, oo wuxuu noqday shaqsi caadi ah, oo aan cidan xil u haynin, waxana lagu darsanin.
1982 kolkii uu ka baxay baarlamaanka magaaladda Trieste wuxuu xabsi ku galay dalka Bulgaria markii uu ka soo baxayna wuxuu 1989 mar kale lagu xidhay dalka Soviet Union.
Markii uu ka soo baxay Xabsiga Ruushka wuxuu shaqo u doontay dalka Maraykanka, wuxuuna ku maqnaa Intii u dhexaysay 1993 and 1998.
Marino Busdachin wuxuu ka mid ahaa aasaasayaasha Ururka la magac baxay NO Peace Without Justice, oo saldhigyo ku leh Italy, Belgium iyo USA.
Hadaba, maxaan intaas oo faalo ah uga bixinay Ururka iyo ninka maanta madaxa ka ah. Waxaanu doonaynaa in aan akhristayaasha u sharaxno in ayna UNPO ahayn Urur citiraaf fiican haysta, balse uu yahay meel shucuubta dulman, xoolo laggaga urursado, wax qiimo ah oo uu maanta halganka loogu jiro xoraynta Ogadenia uu ku soo kordhinayo ma uu jiro.
Aad baan ula yaabay, sida Mohamed Omar Osman [Jwxo-shiil], Maday [Abtidoon] iyo Ahmed Abdi Gurhan [xamari], oo iska dhigaya in ay xal ummad u maqan yihiin goobtaasi ay soo fariistaan, ayna iyaguun isa soo qoreen.
Hadaba, Ahmed Abdi Gurhan waxan dhihi lahaa, sadexdaada caruurta iyo hooyadood ayaa shaqo kugu filan. Marka aad intaas raganimadeeda ka soo baxdid, waxaan kugula talin lahaa in aad Xawaaladada qutul-yoomkaaga ka soo saaratid, ama hoteelada sariiraha aad gogoshid, kana leexatid saaqidiinta ku lugoynaya [waa iga talo].
Mida xigata waxaa Mohamed Omar Jwxo-shiil, waxaan u sheegayaa in ay Ciyaartii dhamaatay [ Akhri Buugga J.B. Satare], waxad loggooyo ummadan u gaysan kartay waad u gaystay. Ma tihid qof muxtarim ah oo wax isku falaya, meel walba sanka ayaa lagaa haystaa adiguna waad ogtahay [Hadaadan taa ogayn, waxaan kugu tirinayaa inaad doqon tahay].
Maday [Abtidoon] cidna uma maqna, wuxuu haayana ma uu jiro. Wuxuu nasiib ku yeeshay in ay Salahudin iyo Dolal ay europe keeneen, hadii uu maanta Afrika joogi lahaa, macluul ayuu u dhiman lahaa. Moahmed farah Aidiid wuxuu isaga soo eryay dadnimo xumadiisa, iyo wax tar la aantiisa. Meel alaaliyo meesha uu shakhsigan soo galo, waxaa ku habsatay, nasiib daro xumo, oo salka ku hayso burbur iyo kala tag. Waa shaqsi ku dhaqma been, oo qof walba xabad rooti ah dhaafsanaya.
Beentii shacabka loo sheegi jiray way soo afjarantay, web-site-yadiinu waxay ku sifoobeen Been abuur iyo aan xad lahayn, maalmahan dambana inta la bartay ayan dan laga galin, oo waxaa loo yaqaanaa Caaqibo xumayaal, waana webebka ay ka midka yihiin Qorahay [Been iyo Batuuto qore], ogadennet [Adeerkii naar u gale] iyo ogden.com [been qurxiska bajeelo ku soo qaadatay].
Shacabka inta waxgaradka ah, waxaa looga digayaa in ay ka foojignaadaan khayr-laawayaasha JWXO-shiiladda oo dambiyo farabadan ka galay Halganka xoreynta Ogadenia, waana mid taariikhda qori doonta.